सिंहदरबारको गेटमै पुगेर गृहमन्त्री र आईजीपीको राजीनामा माग, अब के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
सिंहदरबारको गेटमै पुगेर गृहमन्त्री र आईजीपीको राजीनामा माग, अब के हुन्छ ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा मागिएको छ ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शन भएको छ ।
बलात्कारविरूद्धको रोष र निर्मलाका निम्ति न्यायका अभियन्ताले बिहीबार बिहान ११ बजे निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको सो ठाउँमा धर्ना र दिएका हुन् ।
उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रहरी महानिरीक्षक विदामा बसेर निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने नारा लगाएका छन् । साउन ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी पन्तको हत्यारा को हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन् ।
यसअघि निर्मलाका बुवाआमाले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकलाई भेटेर छोरीका हत्यारा पत्ता लगाउन आग्रह गरेका थिए । यो घटनाको अनुसन्धानमा सुरूदेखि नै प्रहरीले लापरबाही गरेको कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
घटनामा संलग्न भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेका दिलिपसिंह विष्टको डिएनए निर्मलाको शरीरबाट लिइएको ‘भेजाइनल स्वाब’सँग नमिलेपछि उनी रिहा भइसकेका छन् । एसपी विष्टसहित तीन जनाको डिएनए रिपोर्ट पनि नकारात्मक आएको छ ।
यसैबीच गृहमन्त्री थापाले घटनालाई अनावश्यक राजनीतिकरण भएको बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हत्यारा पत्ता लाग्न १२ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन् ।